यस्ता संकेत तपाइको पार्टनरले देखाउदै छन् भने सम्झनुहोस, पार्टनरले तपाइलाई धोका दिदै छ !! (महिलाले जान्नैपर्ने) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/यस्ता संकेत तपाइको पार्टनरले देखाउदै छन् भने सम्झनुहोस, पार्टनरले तपाइलाई धोका दिदै छ !! (महिलाले जान्नैपर्ने)
दाम्पत्य सम्बन्ध सधै एकनास चल्दैन । दम्पतीबीच मत मिल्दैन, सोंच र व्यवहार मिल्दैन । बेलाबखत यसमा ख’टपट आउनसक्छ । दाम्पत्य जीवनमा सानोतिनो ख’टपट आउनु स्वभाविक हो । यसबाट उनीहरुले एकअर्कालाई बुझ्न सक्छन् भने पारिवारिक जीवनमा थप परिपक्कता पनि आउँछ । पारिवारिक जीवन चलाउने क्रममै हुने मतभेद, मनमु’टाव सामान्य र स्वभाविक हो ।
सबै व्यक्ति मनको कुरा खोलेर बोल्ने स्वभावका हुँदैनन् । कोही धेरै बोल्छन्, कोही कम । कोही सार्थक कुरा बोल्छन्, कोही गफाडी मात्र पनि हुन्छन् । तपाईंको पार्टनर कम बोल्छन् वा धेरै ? त्यो महत्वपूर्ण भएन । यद्यपि उनी सधैजस्तो तपाईंसँग अन्तरंग कुरा गदर्नन् भने त्यसमा केही ग’डबड छ भनेर बुझ्नुपर्छ । पार्टनरले आफुसँग बोल्न रुची नराख्नुमा उनकै दो’ष मात्र हुँदैन, आफ्नो गल्ती पनि हुनसक्छ । त्यसैले पार्टनरले आफुसँग अरुबेला झै स्वभाविक ढंगले कुराकानी गर्न छाडेमा वा कुरा गर्न नचाहेमा तपाईंले त्यसको कारण खोज्नुपर्छ । साथसाथै यसले के पनि संकेत गर्छ भने तपाईंका पार्टनरले तपाईंलाई धो’का दिदैछ ।
धरहरा पुनर्निर्माणमा तीव्रता, अर्को वर्ष चड्न पाईने